Nitrate-umhloli: Ukucaciswa, ukubuyekezwa kanye namanani. Indlela ukukhetha ama-nitrate umhloli?
Nitrate - isakhi engokwemvelo amanzi isitshalo ukudla. Lawa chemical ukuthi bebodwa akuzona eziyingozi. Njengoba nitric acid nosawoti, basuke udle kanye ngokudla neziphuzo, okuyinto ukunciphisa kwabo nitrite. Futhi lokhu isici esisha - akalutho kodwa ubuthi. Nitrites abe nomthelela omubi zonke izicubu womuntu futhi izitho, zikhala ekusebenzeni amasosha omzimba, isibindi, kubamba umzimba.
Nokho, iyingozi empilweni babe nitrate kuphela uma ingqondo idlula isabelo sansuku zonke. Futhi kukhona cishe kuyo yonke indawo. Ngezinye ngokweqile amazinga nitrate ithonya ubuchwepheshe besimanje nokusetshenziswa ngokwanele asebenzayo fertilizer.
Kukhona imithetho ethile ukuthi zonke izithelo nemifino ngaphambi kokuthi ufike emashalofini chain iimfesi kumele ihlolwe nokusetshenziswa professional nitrate test (ye-nitrate). Kodwa, ngeshwa, imfuneko esinjalo wanelisa njalo futhi abathengi ahlinzekwa imikhiqizo enobungozi kakhulu empilweni. Kungenzeka yini ukuba uthole nitrate e imikhiqizo wena? Yebo. Futhi lokhu, ochwepheshe batusa ukuthenga ama-nitrate umhloli. Le idivayisi siqu akwazi ukukala ukuthi nitrate e imifino nezithelo, okuyinto kungenziwa ngqo emakethe noma esitolo.
Indlela ukukhetha ama-nitrate umhloli? On yiphi idivayisi ukumisa amehlo akho? Cabangela ezinye izici sici for leli thuluzi.
Digital kanye analog instrumentation
Nitrate umhloli kungase kubonise izinga nitrogen nosawoti imikhiqizo ehlukene. Ngakho, ngo-amadivayisi analog zonke izilinganiso wathola zihunyushelwa. Ngenxa yephutha okusezingeni eliphezulu ukusungula ngqo chemical okuqukethwe izingxenye eziyingozi akunakwenzeka. Nitrate umhloli analog uhlobo unenkumbulo elincane lapho kugcinwa yisishiyagalolunye izinkomba amazinga kuvunyelwe. Inzuzo enkulu zedivayisi analog yikhono layo ulinganise asidi kwenhlabathi.
Digital ama-nitrate umhloli Kuyinto elula kakhulu. Ibonisa ezingeni izakhi ngokushesha eziyingozi ngaphandle nokubala ezimele. Le datha olunembile okungaphezu uzakwabo analog, kodwa ngokungafani naye, digital ama-nitrate umhloli asifanele yokulinganisa inhlabathi asidi.
Yini nemingcele ukuze ayicabangele lapho ekhetha inzwa nitrate? Ochwepheshe batusa ukuba banake ukubukeka imodeli. Inzuzo kunoma iyiphi idivayisi zanamuhla ngisahlose yayo futhi compactness. Lezi zici ezibalulekile okufanele kucatshangelwe okukhethiwe, ngoba idivayisi uzoqhubeka ezizosetshenziswa uma ngokuvakashela izimakethe nezitolo. nitrate Heavy futhi bulky akunakwenzeka ukuba kufaneleke lapho sithenga.
Ukukhetha nitrate, kubalulekile ukunquma lapho izosetshenziswa. Isicelo zedivayisi, ezisebenza inethiwekhi, kungagcini ekhaya kuphela. Uma imikhiqizo ngeke ihlolwe ngqo ukuthenga kwabo, kuzothatha nitrate kokuba ezimele ugesi. Okuhle kunakho konke, uma ibhethri. Naye nitrate is icala like umakhalekhukhwini. Uma idivayisi sokulinganisa eziyingozi nitrogen nosawoti lusebenza ku amabhethri ezivamile, kuzobiza ukulondoloza ngenxa isidingo esikhundleni sabo njalo.
Kunconywa ukuba ayeke ukukhetha kudivayisi, elikwaziyo nemiphumela ezahlukahlukene. Ubukhulu balo apharathasi iqala 0 mg / kg. Kufanele kukhunjulwe ukuthi le isilinganiso esinembile kakhulu kwezinto ezingcolisayo umsebenzisi uthola uma idivayisi ugcina umbhalo mass zomzimba womuntu. Lokhu kubaluleke kakhulu uma kwenzeka ukuthi imikhiqizo ihloselwe izingane uthenge. amazinga Safety nitrate kubhekwe isikolo angu ezinhlanu amakhilogramu esisindo ngayinye.
Lapho ukhetha inombolo ye-nitrate izinhlelo silinganiso sibaluleke. Yingakho ngaphambi kokuthenga kuyadingeka ukuze sithole uhlu imikhiqizo okuzokwenziwa kukalwa ezingeni izinto eziyingozi. Njengomthetho, wonke amamodeli nitrate ukunikeza imiphumela izilinganiso izithelo nemifino, inhlanzi nenyama. Lokhu kusebenza kwanele umthengi. Nokho, uma ufuna ungathola amadivayisi nge uhlu ebanzi. Kukhona onobuhle izinhlelo ezengeziwe. Ngokwesibonelo, lapho nitrate umhloli nemisebe dosimeter (2 1).
Kukhona amamodeli ifakwe ikhibhodi ulwelwesi. Kuvikela iyunithi kusuka amanzi spray. Amanye amadivayisi sezifakelwe okucaciswe luketshezi-matrix esine-kwasemuva. Lesi sici ewusizo uma usebenzisa ye-nitrate ezimweni ezimbi sezulu noma emaphandleni.
Ukuze isebenze ngethuluzi ngokunethezeka, kuyatuseka ukuba ukhethe imodeli kokuba:
- ubuncane imiyalo nezinkinobho;
- imenyu Russified;
- ezihlukahlukene izilungiselelo;
- wokufaka digital imiphumela.
umsebenzi nitrate wenziwa kahle elula. Ukuze ibone okuqukethwe izinto eziyingozi e imikhiqizo device ngamunye kuhlinzekelwe ngothi lokuloba electronic (ihlanganiswe noma nezimo). Lo msuka inzwa bacwiliswa test ophansi. Uma yemifino noma isithelo, ekupheleni probe kungenziwa nje sinamathela izithelo locezu. Ngokulandelayo, element inzwa waphakamisa kuze isibonisi kuyoholela. Ngokufanayo-ke kwenzeka kanye isheke amanzi. Ulwazi okuholela ngokushesha kusetshenzwe yidivayisi.
Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi ukusatshalaliswa nitrate e nemifino ngokulinganayo. Ngokwesibonelo, ngo-izaqathe izinto ezilimazayo kakhulu eziqukethwe umsila wayo, umongo kanye tip. Ngakho, izilinganiso zobukhulu anganika Imiphumela sobuntu sokuhlalisana ngokuthula. Kodwa njengoba iklabishi, omningi walo nitrate eziqukethwe amaqabunga ayo engenhla futhi ihleza. Ngo ikhukhamba le izinto elimazayo zanqwabelana isikhumba. Konke lokhu kufanele kubhekwe uma usebenzisa idivaysi.
Yiqiniso, ne isibalo imisebenzi ukuthi ongenza nitrate umhloli, intengo ke, ngokulandelana, okwandisa. Ngokwesibonelo, amadivayisi lapho kuphela uhlu encane imikhiqizo inkumbulo test esibekiwe, uhla ruble 2 kuya kwezingu-5. Uma nitrate uyakwazi ukuthola inani izinto eziyingozi phakathi inombolo enkulu izihloko, wayihlukumeza kakhulu masinyane, kwandisa inani kuze kube ama-ruble ayizigidi 20-25.
A ezihlukahlukene onobuhle
Kuze kwaba seminyakeni embalwa edlule, labo ababefisa ukuba ekhaya lakhe Imishini ngu yokulinganisa nitrate ekudleni imishini enjalo emakethe inikeza okunezinhlobonhlobo sasivumela okuncane. Uhlu imikhiqizo efana ucede amamodeli kuphela sha "Soeks". Le divayisi kuyinto nitrate umhloli-dosimeter.
"Soeks" - inkampani kwakungelona iphayona ezindabeni izinto eziyingozi level nesilinganiso emikhiqizweni. Ngaphambi kokuba ngempumelelo ukusebenza umkhiqizo wenkampani "Morion". Nokho, uphawu "Soeks" ukuze ezahlukene ebanzi of abathengi waziwa futhi ungumholi ecacile emakethe.
Kuze kube manje, abathengi ungakhetha imodeli kwibanga sasivumela ububanzi. Ngakho, kusukela ngo-2014 e amanethiwekhi commercial waqala igcwaliseke imikhiqizo brand Greentest. Lezi amadivayisi aqine hhayi kuphela e-Russia, kodwa futhi, sibonga ukusetshenziswa ngentuthuko yakamuva, ukuncintisana ngempumelelo emakethe emhlabeni.
Ngo-2016 wabonakala nitrate EcoLifePro-2 ne isici ewusizo kakhulu elikuvumela ukuba kukalwe usawoti emanzini. Le divayisi nomkhiqizi Russian. Igama layo in Latin kubonisa umsebenzi yomenzi ukuletha idivaysi ezimakethe zomhlaba jikelele.
Thenga amathuluzi for ukulinganisa ezingeni izinto ezilimazayo e imikhiqizo kungaba noma ezikhethekile Izitolo okudayisa noma ezitolo, ukusebenza ku-intanethi. Phakathi ezihlukahlukene nabathengisi ukunikeza amamodeli ama-nitrate umhloli "Morion". Ukuze usebenze nedivaysi enjalo ayidingi amakhono akhethekile, kodwa ayidingi yeendleko ezikhethekileko yesondlo, ngaphandle esikhundleni amabhethri.
Lapho uthenga ama-nitrate umhloli ngaso sonke isikhathi kufanele ihlolwe. Ukuze wenze lokhu:
- ukufaka amabhethri;
- Ubambe pH inkinobho;
- ngokushintshanisa inkinobho kuya umcibisholo wesokudla ukuletha imitha "5" uphawu;
- uyekele inkinobho futhi uqiniseke ukuthi umcibisholo seliphambuke ukuba isiqalo isikhundla sakhe, ubumi phambi "0".
Yini i-nitrate umhloli ezinjalo? Izibuyekezo Umthengi uyaqinisekisa ukuthi kungenzeka kudivayisi ukukala asidi kwenhlabathi. isilawuli enjalo wenziwa ku ngobuningi wetted futhi ohlangene inhlabathi isayithi. Ukuze nesilinganiso asidi eyanele ukwethula probe enhlabathini kumuntu 1.5 cm ukujula. Inani pH amayunithi imitha inaliti kubonisa.
Yini enye uyakwazi lokhu ama-nitrate umhloli? Umsebenzisi ukubuyekezwa kanye uqinisekisa ukuthi idivayisi inquma lizinga empilweni yomuntu e ngamathe yayo. Ukuze uthole imiphumela ezinokwethenjelwa, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi indaba for isifundo esinjalo kufanele kuthathwe esiswini esingenalutho. Ngamathe ibekwe endaweni beaker, futhi kulo Uphenyo sifakwe. Imiphumela etholwe ukhombe isimo sempilo yomuntu futhi imikhawulo Kunconywa ekudleni.
Nokho, umsebenzi oyinhloko idivayisi "Morion" iwumphumela ukulawula kokuqukethwe nitrate emikhiqizweni izithelo nemifino. Ngenxa yale njongo, i-probe sivela kumuntu 1.5 cm kusukela Isiqu ukujula. Imiphumela Kubikwe kufanele kuqhathaniswa kwezinkambiso ekhona.
Ngaphezu kwakho konke okungenhla imisebenzi nitrate "Morion" uyakwazi ukukhiqiza ukulawula izinto ezilimazayo ezitholakala isitshalo kwezicubu. Ngokusho imiphumela nesilinganiso, kuyacaca, kungakhathaliseki iqondiswa avale phezulu kwezitshalo nitrogen zabo umquba esizayo.
Amadivayisi ethandwa kakhulu emakethe for ukulinganisa izinto eziyingozi e ukudla, kukhona amadivaysi wale nkampani. Lo mkhiqizo Amatebhe kanye dosimeter nitrate umhloli (2 1). Idivayisi lusebenza ku yebhethri lingashajwa kusuka isokhethi amandla yasendlini.
Ngenxa zako-nitrate-umhloli "Soeks" umthengi Izibuyekezo ewufanele, ngokuvamile omuhle. Le divayisi:
- sibonga compact theka;
- inquma lizinga nitrate nemisebe;
- Iqukethe itafula kumemori MPC nitrate;
- isignali ezwakalayo uma esingeqile ezingeni embundwini ukungcola;
- Imiphumela umphumela amasekhondi amahlanu.
Kulabo abathengi akudingeki umsebenzi we dosimeter, umenzi ikhiphe ama-nitrate umhloli NUC-019-1. Lona insimbi yokuqala Russian, okwakubekelwa eqinisekisiwe ngokugcwele futhi elihlangabezana nazo zonke izidingo zakamuva amadivayisi alesi sigaba.
Yiziphi izinzuzo main possessed ama-nitrate umhloli "Soeks"?
- esinejubane futhi selectivity test eyenziwa, kanye ukuthembeka Imiphumela;
- malula futsi kalula ukusetshenziswa nge imenyu enembile;
- nokuba khona Ukuvala ngokuzenzakakela umsebenzi;
- asikho isidingo ukumisa akhethekile ukunikezela;
- khona kwimemori izinkomba ngabanye MPC ukuze uthole uhlu enkulu yemikhiqizo;
- ikhono ukuxhuma kwikhompyutha nge-USB-port izibuyekezo zesofthiwe;
- ukwenaba emaphaketheni kanye nomklamo;
- Usayizi Compact nesisindo ekukhanyeni, ilingana '66
Innovative nitrate umhloli Soeks eziklanyelwe ngenxa ukuthola izinto eziyingozi emikhiqizweni ngokweqile. Amalungu uqaphele ukuzwela okusezingeni eliphezulu futhi selectivity zedivayisi uyakwazi ekuvimbeleni umuntu ku khona compounds eziyingozi.
Uyini umehluko lokhu model kusukela esedlule? Nitrate-umhloli "Soeks NUC-019-01» yakhelwe usebenzisa ubuchwepheshe samanje sedijithali. Kuyinto icwecwe ukuze kungabhekwana ngisho ephaketheni lakho. umsebenzi wayo wenziwa ku amabhethri kanye Akudingi ukuqeqeshwa okukhethekile. Ngenxa zonke lezi zimfanelo, ama-nitrate umhloli "Soeks" impendulo evela kumakhasimende nochwepheshe wathola njengoba the best ekhaya lisebenze yalolu hlobo.
Operating kule divayisi wenziwa ngezinga enembile ngokusebenzisa izinkinobho emihlanu ngezihluthu panel. Omunye wabo sivuleka futhi edivayisini, kanti bonke abanye owadingayo ukuze uhambise imenyu. Ngokushesha ukulungiselela nitrate emsebenzini ivumela umbukiso omkhulu lapho ukukhetha igama lomkhiqizo investigational. Ukukhethwa kwe-MPC okwesikhathi yemifino ethile noma izithelo ikuvumela ukuba uthole imiphumela yokuhlolwa sinembe kakhulu. Uma umkhiqizo ekhethiwe, idivayisi wenza samonastrooyku. Umnikazi kungaba nje unamathele the uphenyo test ophansi.
Umphumela test futhi ngesilinganiso MPC lizovela esikrinini zedivayisi isikhathi kancane isikhathi. Ngesikhathi esifanayo ke zizokwenziwa kanye nokuhlola ukuhlolwa, okuyilezi:
- nitrate ijwayelekile;
- ngokweqile kancane izinto eziyingozi;
- lokuhlala kungamukeleki.
Abathengi uphiwa nokukodwa ngaphezulu kudivayisi yesimanje, oluqanjwe inkampani - ekotester "Soeks". Dosimeter nitrate Tester - imisebenzi emibili eyinhloko isisetshenziswa esisodwa ngayo nefunda ngayo umuntu akakwazi kuphela ukuhlonza okuqukethwe izingxenye elimazayo imikhiqizo, kodwa futhi ukukala ezingeni ngemisebe.
Idivayisi has a touch screen kanye nebhethri esakhelwe ngaphakathi. Onjiniyela Kudivayisi baye wamnikeza uzibuthe, ngawo nitrate kugcinwa emnyango esiqandisini futhi njalo ngakwesokunene. amazinga Gada nitrate, leli thuluzi ingahle amagama amahlanu anesixhenxe imikhiqizo, kuhlanganise amakhowe nemifino, inyama kanye nemifino.
Ukuthola igajethi ewusizo enjalo, ungabheka izinga nitrate e imikhiqizo kuka ngeke ugcine impilo yakho kusuka ubuthi by izinto ezilimazayo,, ngeshwa, ngokuvamile ekhona imifino besinika izithelo nokunye. D.
Survey Environmental. Ubunjiniyela kwemvelo survey ukuze kwakhiwe
Kuyini ibanga ohlelweni inkanyezi Alpha Centauri? Kungenzeka yini ukuba ndizela Alpha Centauri?
Lenses: izinhlobo lens (physics). Amafomu wokuqoqa, optical zimhlakazile lens. Indlela ukucacisa uhlobo lens?
Amagciwane angabasizi le causative ejenti yanoma yimuphi isifo? isifo womuntu ezibangelwa amagciwane
Amakilasi compounds wezinto
Imikhiqizo "naseVichy" izinwele ukukhula
Imithi 'Mersilon'. Yokusetshenziswa
BLUBOO D1: ividiyo entsha ubonisa ukuthi kungenzeka Ikhamera Dual
Fashion ukwakheka - isihluthulelo sempumelelo
Kanjani ukukhetha ubukhulu egumbini TV? Usayizi eliphezulu Igumbi TV
Lagendarnaya Countess Bathory - Izinganekwane Namaqiniso
Artichoke: ukulungiselela, zokupheka zokupheka ngezithombe
Carroll Baker: biography, career, impilo yomuntu siqu.
Amakati British njalo sibonise uhlamvu
Vyacheslav Nevinny Jr. kusukela ngobugwala Lion ukuze Griboyedov